Gabadhii ugu horreysay ee soo tebisay fayraska Korona ee Wuhan ka dillaacay oo xabsiga la dhigay | Chinese Human Rights Defenders
Gabadhii ugu horreysay ee soo tebisay fayraska Korona ee Wuhan ka dillaacay oo xabsiga la dhigay
December 28, 2020 Comments Off on Gabadhii ugu horreysay ee soo tebisay fayraska Korona ee Wuhan ka dillaacay oo xabsiga la dhigay
Originally published by BBC on December 28, 2020
Gabar weriye ah oo u dhalatay Shiinaha taas oo soo tebisay dillaacitaankii coronavirus ee magaalada Wuhan ayaa lagu xukumay afar sano oo xabsi ah.
Zhang Zhan waxaa lagu eedeeyay “muran iyo abuuridda dhibaato”, oo ah eedeyn uu inta badan Shiinaha u adeegsado dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka.
Haweeneydan 37 jirka ah oo hore u ahayd qareen ayaa la xiray bishii May, dhowr bilood ayayna cuntada ka soontay. Qareennadeeda ayaa sheegay in xaaladdeeda caafimaad ay liidato.
Ms Zhang waa mid ka mid ah dhowr weriye oo dhibaato kala kulmay tebinta fayraskii ka dillaacay Wuhan.
“Zhang Zhan way muraara dillaacsaneyd markii xukunka lagu dhawaaqay,” ayuu yiri Ren Quanniu, oo la sheegay inuu ka mid yahay qareennada difaacaya, sida laga soo xigtay wakaaladda AFP.
Mr Ren ayaa intaas ku daray in hooyadeed ay barooratay markii xukunka uu dhacay.
Warbaahin xor ah kama jirto Shiinaha, dowladda ayaana lagu yaqaannaa ugaarsiga dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee loo arko inay dhaliilayaan sida ay dowladda wax uga qabanayso fayraska.
Leo Lan, oo ah la taliye dhanka baaritaanka iyo u dooddida xuquuqda dadka kana tirsan Dalladda Xuquuqda Aadanaha iyo Difaaca ee Shiinaha The Network of Chinese Human Rights Defenders (CHRD) NGO said ayaa sheegay in xukunka Ms Zhang uu yahay “mid walaac leh”.
“Xukunkeeda waa mid culus. Dowladda Shiinaha waxaa ka go`an inay aamusiiso iyada ayna u cagajugleyso muwaaddiniinta kale ee isku dayay inay soo bandhigaan waxa ka dhacay Wuhan,” ayuu u sheegay BBC News.
“Waxaan ka walaacsanahay xaaladda muwaaddiniinta kale ee xiran kuwaasoo soo tebiyay xanuunka safmarka ah.”
Ms Zhang oo ay la socdaan qareennadeeda ayaa saakay ka soo muuqatay maxkamadda Shanghai.
Sida maxkamadda laga sheegay waxay Wuhan u safartay February si ay si madax bannaan ugu soo tebiso fayraskii ka dillaacay halkaas.
Tebinteedii tooska ahayd iyo warbixinnadeeda ayaa bishii February si aad ah la iskula wadaagay baraha bulshada, taas oo sababtay inay dowladdu ogaato.
“Waxay tiri markii aan halkaas booqday (toddobaadkii hore): ‘Haddii ay xukun culus igu ridaan waan diidi doonaa cuntada ilaa maalinta ugu dambeysa’… Waxay u maleyneysaa inay ku dhiman doonto xabsiga,” ayuu yiri Mr Ren kahor maxkamadeynta.
“Waa hab aad u daran oo looga cabanayo bulshadan iyo deegaankan.”
Qareen kale, oo lagu magacaabo Zhang Keke, oo la sheegay inuu booqday Ms Zhang, ayaa sheegay in xaaladdeedu wanaagsaneyn, wuxuuna intaas ku daray inay xitaa u baahneyd in laga caawiyo aaditaanka suuliga.
“Waxay maskax ahaan dareemeysaa daal, maalin walba waxay uga dhigan tahay dhibaato,” ayay tiri Ms Zhang.
CHRD ayaa sheegtay in warbixinnada weriyaha ay ku jireen soo tebinta xiritaanka weriyeyaasha kale ee madaxa bananan iyo tacaddiyada lagula kacay qoysaskooda doonayay isla xisaabtan.
Ms Zhang ayaa laga waayay Wuhan 14-kii May sida laga soo xigtay CHRD. maalin kaddib, waxaa la sheegay inay xireen booliiska ku sugan Shanghai, oo in ka badan 400 oo meyl (640km) u jirta Wuhan.
Waaxaa markii hore la maxkamadeeyay horraantii November. Warqadda maxkamadeynta ayaa lagus heegay inay “warbixin been a buur ah ay qoraal ahaan iyo muuqaal ugu baahisay [baraha sida] WeChat, Twitter iyo YouTube”.
Waxaa sidoo kale lagu eedeeyay inay aqbashay wareysiyo ay la yeesheen warbaahinno ajnabi ah isla markaana ay war khalad ah ka fafisay fayraskii ka dillaacay Wuhan.
Waxaa la soo jeediyay xukun u dhaxeeya afar ilaa shan sano.
Cunto ka soomid
Iyadoo ka cabaneysa xariggeeda, ayay Ms Zhang ka soontay cuntada waxayna sheegtay in xaaladdeeda caafimaad ay liidato
Mid ka mid ah qareennadeeda ayaa sheegay in markii uu booqday horreentii bishan ay u sheegtay in si qasab ah loogu quudiyay tubbo lagu xiray. Wuxuu sidoo kale sheegay inay ka cabaneysay madax xanuun, dawakhitaan iyo calool xanuun.
“Way daallan tahay 24 saac maalintii, waxay u baahan tahay caawinaad marka ay aadeyso suuliga, hurdadana dhib ayay ku qabtaa,” ayuu yiri qareenkeeda Zhang Keke.
Qareenka ayaa codsaday in dib loo dhigo maxkamadeynta iyadoo la eegayo xaaladda caafimaad ee Ms Zhang.
Tani ma aha markii ugu horreysay ee Ms Zhang ay isku dhacaan dowladda Shiinaha. Sida laga soo xigtay CHRD, booliiska ayaa ugu yeeray Shanghai bishii September 2019 wayna xireen iyagoo ku eedeeyay taageero ay u muujisay dad u dooda xuquuqda aadanaha oo ku sugan Hong Kong.